ILoft eMountain Creek Lodge yase-Oklahoma
Uvimba sinombuki zindwendwe onguCindy
Wamkelekile kwiLoft eMountain Creek Lodge yase-Oklahoma! Ngaba ujonge umoya omtsha kunye nendawo enoxolo? Kuthekani ukubaleka yothando? Uyifumene ilungile apha apho siye sabuyisela ngothando ilitye likatatomkhulu wam abalakha malunga no-1940 kwaye balijika laba yindawo entle yokuhlala kunye nesiganeko. Le yenye ye-barndominium enobubele inamagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlambela eli-2 phezulu kwindawo yomgangatho wokuqala we-hay, enegumbi lokuhlambela elongezelelweyo kunye nekhitshi kumgangatho wokuqala.
I-Loft yayiyeyona ndawo iphakamileyo ye-hay yendawo yokugcina impahla ngaphambi kokuba siyibuyisele. Namhlanje yisuite yobumnandi ene-Wi-Fi, i-TV ethe ngqo ixhotyiswe/inikwe iRoku TVs, kunye nabo bonke ubunewunewu abakhenkethi ababufunayo kwindawo yangoku.
• I-Keurig ikofu, ifriji encinci, kunye ne-microwave en suite
• Indawo yokutyela ekwigumbi eliphezulu
• Ukufikelela kwikhitshi lentengiso elisezantsi
• Indawo yokuhlamba impahla epheleleyo
Konwabele ukuphila kwangaphandle okumangalisayo kunye nokubambisa amachibi ama-2 kunye nokukhulula amachibi okuloba kumgama wokuhamba we-Lodge, ukubukela izilwanyana zasendle ezinje ngenyamakazi, i-turkey, kunye neendidi ngeendidi zeentaka zemveli, okanye ngokuhamba nje kwaye uphumle kumhlaba obanzi wepropathi. Ukuba uthanda ukujonga iinkwenkwezi okanye ukufota kweenkwenkwezi, sikwindawo yongcoliseko lokukhanya okuphantsi kwaye amakroza ayabonakala ngobusuku obuzolileyo.
Mininzi eminye imisebenzi ikulindile!
Sifumaneka njengoko kufuneka. Siye sifike siphinde siphume kwindawo eqhelekileyo kodwa hayi ngaphakathi. Indlu yasefama emhlophe ebekwe kunye neshedi yiofisi yethu. Siyavuya ukuncedisa ngayo nayiphi na indlela.